Cold Showers to Ode (အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ) - Porn On Your Brain
တစ်မျိုးသို့မဟုတ်တစ်မျိုးအားလျှပ်စစ်နည်းဖြင့်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရန်အလွန်အမင်းလိုအပ်နေသူများအတွက် reboots and renewals ...
By ဂျိမ်းစ်က Parker - မတ်လ 2020 ပြIssueနာ
အိပ်ရာထဲကနေမီးဖိုချောင်ထဲပြန်ဝင်တော့မီးဖိုပေါ်တင်လိုက်တယ်။ ထိုအခါငါထင်: ကောင်းပြီ၊ အချိန်သည်အထူးသဖြင့် Jack Reacher ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။ အနည်းဆုံးငါးမိနစ်ရေနွေးအိုးပြုတ်သည်အထိ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ Laptop ကိုဖြိုခွဲပါ၊ သတင်းကိုဖတ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ပြတင်းပေါက်မှ murkily ငေးကြည့်။ ပန်းကန်ဆေးစက်ကိုချလိုက်လား? အိုအချစ်ရေ။ ဒီဘဝဟာဒီအချဉ်အလေးချိန်၊ အနံ့ကဘာလဲ ငါ့ရဲ့ဝန်းကျင်ကအခိုးအငွေ့တွေတက်လာတယ်။ ထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကိုနံနက်7မတိုင်မီ
စာဖတ်သူဒီမှာငါကုန်းတက်မသွားချင်ဘူး ဘဝပြောင်းလဲခြင်း၊ အာရုံကြောဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ထိပုတ်ခြင်း၏လှည့်ကွက်၌ဉာဏ်အလင်းပွင့် - ကျွန်ုပ်သည်နံနက်စောစောအအေးမိရောဂါအတွက်ဤပြောဆိုမှုများကိုမလိုချင်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောသင်၏စိတ်ဓာတ်၌နှေးကွေးသောချုပ်ရိုးတစ်ခု၊ ကျဉ်းမြောင်းသော ဦး နှောက်နှင့်တစ်နေ့လုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားတစ်မျိုးသို့မဟုတ်တစ်မျိုးအပြန်အလှန်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများပြုလုပ်ရန်ပြန်လည်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုးခြင်းများ - သို့မဟုတ်သင်လိုချင်လျှင် အနည်းငယ်မြန်မြန်နိုးထဖို့၊ မင်းဒါကိုမင်းရိုက်ဖို့အကြံပြုချင်တာလား။
ပထမဆုံးလုပ်ပါ အဖြစ်မကြာမီသင်ထအဖြစ်။ ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမညှဉ်းဆဲပါနှင့်။ အပူရှိန်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စသည်တို့ကိုမရောထွေးပါနှင့်။ ပလတ်စတစ်ကုလားကာကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လှည့်ဖြားပါ၊ အအေးမိဆုံးနေရာကိုထိပုတ်ပါ၊ အသက်ရှူပါ၊ ဝင်ပါ။ မကျေမနပ်ဖြစ်စေ penitentially မဟုတ်ဘဲ slapstick ဖီဆန်ခြင်းဖြင့် : ဘုရားသခင်၏မိခင် မင်္ဂလာပါ ငါသွားမယ် (နေ့ခင်းဘက်တွင်ပါးနင်းပါးပါးပါးပါးပါးပါးနပ်သောဖီဆန်မှုကိုခံရန်အလွန်စောပါကပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများကို ဦး ခေါင်းလှုပ်ခါကြည့်ပါ။ ) ရေသည်ထိသွားပြီးဇီဝဗေဒသည်သူ့ဟာသူအခိုင်အမာပြောဆိုသည်။ သင် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု၏ငြီးငွေ့ပူဖောင်းမဟုတ်; မင်းဟာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမင်းကိုစိန်ခေါ်နေတယ်။ မင်းလေကိုမျိုတယ်၊ မင်းရဲ့သွေးခုန်နှုန်း။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင်၏ချစ်စရာကောင်းသော furry ဟောင်း ဦး နှောက်သည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာပြောင်မြောက်သွားသည်။ အတွေးဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖျက်သိမ်းသည်။ သငျသညျစိုကျရေအေး၏ဂျက်လေယာဉ်အောက်မှာအမည်မဲ့နို့တိုက်သတ္တဝါပါပဲ။ ဒါကတကယ်ကိုမြန်ဆန်တဲ့သတိထားမှုတစ်ခုပါပဲ။ ၂ စက္ကန့်အတွင်းမှာသင်ဟာ nonentity နဲ့စုစုပေါင်းရှိနေခြင်းကြားကချိုသာတဲ့နေရာကိုရောက်နေပါတယ်။ အအေးနောက်ကွယ်ကချမ်းတယ် လှပသော, ရွေ့လျားသုည; ယင်း၏အလိုတော်ကိုသင့်အားကွေးကူခြင်းမရှိသည့်လျှံ။ ဒါ့အပြင်ဒီဟာကအရေးကြီးတယ်၊ သင်ဟာရေအေးထဲကိုနွေးထွေးစွာအိပ်နိုင်ပြီးဆံပင်၊ ကိုယ်ခန္ဓာ၊ အရာအားလုံးကိုပြုပြင်နိုင်ပါပြီ။
ထိုအခါသင်သည်ထွက်ရ, သင်ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များကစိတ်ခံစားမှုမြင့်မားခြင်းနှင့်နိုးနိုးကြားကြားရှိခြင်းတို့နှင့်ဆက်နွှယ်နေသည့်သင်၏ neurotransmitter များအမှုအရာများဖြစ်ပွားခဲ့သည်. ခင်ဗျားကနိုးကြားနေတယ်။ သင့်ရဲ့အရေပြားရောဂါသည်အေးမြပြီးတံဆိပ်ခတ်သကဲ့သို့။ သင်၏ ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်သည်သေးငယ်သောခေါင်းလောင်းကဲ့သို့တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသည်။ မီးဖိုချောင်ကနေရေနွေးအိုးကစပြီးဆူညံသံတွေကြားနေရတယ်။